Madaxweyne Farmaajo oo qadka taleefan kula hadlay Uhuru Kenyatta, kana tacsiyadeeyay shilkii diyaaradda - Jowhar Somali Leader
Home Somali Madaxweyne Farmaajo oo qadka taleefan kula hadlay Uhuru Kenyatta, kana tacsiyadeeyay shilkii...
Madaxweyne Farmaajo oo qadka taleefan kula hadlay Uhuru Kenyatta, kana tacsiyadeeyay shilkii diyaaradda
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa taleefan kula hadlay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, isagoo uga tacsiyadeeyay labadii qof ee Kenyanka ee ku dhintay diyaaraddii ku burburtay Bardaale.
Qoraal ay faafisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa lagu shaaciyay wada hadalka khadka taleefanka ee dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana Madaxweynaha Soomaaliya la soo xiriiray dhiggiisa Kenya, una sheegay inuu ka xun yahay dhacdada shilka aheyd ee diyaarada African Express, kana tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay.
Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu faray Hey’adda Socdaalka Soomaaliya inay si degdeg u baarto wixii sababay diyaaradda burburtay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku casuumay Hey’adda Saadaasha Hawada Kenya inay baaritaanka qeyb ka noqoto.
Sidoo kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay in Madaxweyne Farmaajo uu qadka taleefanka kula xiriiray dhiggiisa Kenya, una gudbiyay tacsi dadka Kenya ee ku dhintay shilkii nasiib-darada ahaa ee diyaaraddii ku burburtay Bardaale.
Dhinaca kale Madaxweyne Farmaajo ayaa weli ka tacsiyadeyn 4-tii qof ee Somaali ee ku dhintay diyaaraddaas ee lagu soo riday Bardaale.
Halkan hoose ka akhriso Warqada Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya.